DFS iyo Taliska AFRICOM oo ka shiray la-dagaalanka Al-shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo uu wehliyo Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage ayaa kulan la qaatay Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee Africa AFRICOM Gen. Stephen Townsend.
Kulanka u dhexeeyay Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda, Taliye Odawaa iyo Taliyaha Ciidamada Mareykanka ayaa waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee Ciidanka dowladda iyo xiriirka iskaashi ee ka dhexeeya labada dhinac.
Sidoo kale inta uu socday kulanka ayaa waxaa looga hadlay dardargalinta dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, kuwaasi oo ka socda qeybo ka mid ah goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin qaar ka mid ah Gobollada dalka.
Labada dhinac ayaa isla soo hadal qaaday taageerada Mareykanka ee ku aadan tababarada Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, si loo xoojiyo tayada ciidamada qalabka sida.
Kulankaan ayaa waxaa uu kusoo beegmayaa, iyadoo Taliska Ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika AFRICOM uu shaaciyay in gebi ahaan Ciidanka Mareykanka ee joogay gudaha Soomaaliya laga saaray, kadib markii uu amar ku bixiyay Madaxweynihii Mareykanka ee Donald Trump.